Muxuu yahay muuqaalka alaabada aluminium ee allwinpack? | Jiahua
1.Anoocyada faahfaahinta, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Cabirka iyo qoto-dheerka ayaa la dooran karaa-inay buuxiyaan shuruudaha kala duwan.
2. Foornada fasalka cuntada weel awaxaa cadeeyay FDA iyo KOSHER. Amniga iyo caafimaadka, iyada oo loo marayo nadiifinta heerkulka sare. Maaddaama ay tahay inay si toos ah ula xiriirto cuntada, sidaas darteed nabadgelyadu aad ayey muhiim u tahay, weelka foornada aluminiumku gebi ahaanba waxyeello uma leh jirka aadanaha, waxaan ugu adeegsan karnaa si fudud.
3. Hagaagsan phagida xoogga iyo culeyska culeyska, hmuuqaal tayo sare leh oo qurux badan, miisaan fudud. Muuqaal dhalaalaya, way fududahay in la qurxiyo cuntada. Waxaa intaa dheer, way fududahay in la keydiyo oo la qaado.
4.Green ilaalinta deegaanka iyo dib-u-warshadaynta, iyo sidoo kale alaabada kale ee aluminium, aluminium dib ayaa loo isticmaali karaa
5. Aaluminium bireed trasi toos ah ayaa loogu isticmaali karaa keydinta, xirxirida, dubista / dubista, sameynta, kululeynta iyo xitaa barafowga, oo si ballaaran loogu isticmaalo meelaha rootida, cuntada duulista, maqaayadaha, cuntada la kariyey, baastada deg dega ah, sanduuqyada qadada ee habboon iyo baakadaha kale ee cuntada.